Buyekeza i-Insta360 Pro: sihlole ikhamera engu-360-degree erekhoda ku-8K | Izindaba zamagajethi
UNacho Cuesta | | Isithombe, Ama-camcorder
Imakethe yekhamera engama-360 degree iya ngokuya ithandwa phakathi kwabasebenzisi, noma kunjalo, emkhakheni wobungcweti izinketho zikhawulelwe kakhulu futhi amamodeli ongakhetha kuzo mancane. Ikhamera ye-Insta360 Pro ingesinye sezethenjwa emakethe yamanje, ekhazimula ngamalensi ayo angu-6 okuthula-iso akwazi ukurekhoda izithombe ku-8K resolution.
Uma ufuna imininingwane eminingi ngale khamera ye-VR, sizokutshela zonke izici zayo ngezansi:
2 Izici ze-Insta360 Pro
3 Ukuvela kokuqala
4 Ikhwalithi Yesithombe ye-Insta360
Ukungabikho ibhokisi lezimanga ze-Insta360 Pro Ibhokisi lamakhadibhodi selithathelwe indawo ngu ikesi lepulasitiki elimelana kakhulu nezikhiye ezimbili zokuphepha evimbela ukuvuleka ngengozi okungabeka engozini ubuqotho bemishini (enenani cishe lama-euro ayizi-4.000, lapha ungayithenga).
Manje njengoba usuyazi ukuthi ibiza malini le khamera engu-360, ngeke ikumangaze nakancane ukuthi ivikeleke kangako. Kubalulekile kumkhiqizo ozohlala unyakaza njalo.
Uma isikhwama semali sivuliwe siyakuthokozela lokho ukuvikelwa kwangaphandle kudluliselwa nakwangaphakathi ngendwangu enkulu yegwebu lekhwalithi ephezulu. Icala lepulasitiki lithola ukushaywa futhi igwebu lizomunca amandla nokudlidliza ukuze i-Insta360 Pro ihlupheke ngalutho.
Ngaphandle kwalokhu okungenhla, esikhwameni sithola izesekeli ezilandelayo:
Ishaja ye-12V ne-5A
Iteyipu yerabha ukuvikela amalensi kumaqhuqhuqhu nothuli
Ibhethri le-5100 mAh ukunikeza cishe imizuzu engama-70 yokuzimela
I-USB eya ku-adaptha ye-Ethernet
UCintra ukuthwala ikhamera ehlombe kamnandi
Imibhalo nencwadi yokubonga evela enkampanini
Yize kufakwe izesekeli ezimbalwa, Ukuze ukwazi ukuqala ukusebenzisa ikhamera, uzodinga imemori khadi ye-SD Extreme PRO V30, V60 noma i-V90 ukuxhasa amazinga okudlulisa adingekayo ukurekhoda ividiyo engu-8K. Futhi sinenketho yokuxhuma i-SSD hard drive usebenzisa uxhumano lwe-USB 3.0. Njengoba ukwazi ukubona, asikwazi ukusebenzisa noma iyiphi inkumbulo ngoba izimfuno ziphakeme.
Izici ze-Insta360 Pro
Ukuze wazi kancane nge-Insta360 Pro, ngezansi unefayela le- isifinyezo sezimpawu zayo eziyinhloko:
Ama-lens angama-6 e-fisheye
Amafomethi we-DNG Raw noma we-JPG
I-7680 x 3840 ku-30fps (2D 360)
I-3840 x 1920 ku-120fps (2D 360)
6400 x 6400 noma 30fps (3D 360)
3840 x 3840 noma 60fps (3D 360)
Ukulungiswa kokusakazwa bukhoma
I-3840 x 1920 ku-30fps (2D 360)
I-3840 x 3840 ku-24fps (3D 360)
Iyahambisana ne-YouTube, Facebook, Periscope, Twitter, Weibo
Ukusekelwa komsindo wendawo
Kusuka ku-1/8000 kuye kumasekhondi angama-60
Ukuqiniswa kwe-6-axis gyroscope
Intambo engu-1 / 4-20
I-SSD hard drive phezu kwe-USB 3.0
Uhlobo lwe-HDMI 2.0-D
iOS, i-Android, iWindows, iMac
5100 mAh ibhethri
Ikhamera ingasetshenziswa ngenkathi ishaja
Ukuqina kwe-Insta360 Pro kusinikeza umkhondo omuhle wokuthi sibhekene neqembu elibizayo, izinsolo eziqinisekisiwe okokuqala lapho sivula imishini futhi umlandeli uqala ukuzungeza ukukhuthaza ukupholisa, into indlu ye-aluminium nayo enakekelayo.
Ingqikithi ye amalensi ama-fisheye amakhulu ayisithupha asibheka eceleni unomphela. Banokuvulwa kwe-f / 2.4 ngakho-ke bakhanya ngokwanele ukuthola imiphumela emihle ngisho nasezindaweni ezikhanya kancane. Uma nganoma isiphi isikhathi ikhamera isenkingeni, sine-ISO elungiswa ngokuzenzakalela kepha esingakwazi futhi ukuzivumelanisa nayo ngamanani asukela ku-100 kuye ku-6400, yize kumanani aphezulu kangaka umbono womsindo esithombeni okuphawulekayo nobukhali kulahlekile.
Ikhamera isebenza ngokuzimela. Sidinga kuphela ukuba nekhadi lememori le-Extreme PRO V30 SD (uma kuyi-V90, ingcono) noma i-hard disk ye-USB 3.0 SSD futhi ibhetri ishajiwe. Ngalokho sinemizuzu engama-75 yokuzimela ukuqopha ividiyo noma ukuthwebula izithombe ezinqumweni ezifinyelela ku-8K.
Ukusebenza okuyisisekelo kwekhamera kungenziwa kusuka kusikrini esincane nezinkinobho ezingaphambili. Ilula kakhulu futhi inembile ukuphatha njengoba sinezinkinobho zokuhamba kuphela kumamenyu, inkinobho yokwamukela nenye yokubuyela emuva. Vele, ukuvula kuthatha isikhathi (cishe amasekhondi angama-90) ngakho-ke kufanele ukubheke ngaphambi kokuthatha isithombe noma ividiyo.
Ngokuzithandela singasebenzisa ithuba lokuxhuma okubanzi i-Insta360 Pro esinikeza kona ukuxhuma izesekeli zangaphandle ezifana nemakrofoni (njengokujwayelekile sinemakrofoni ezi-4 ezihambisana nokuthwebula umsindo wendawo, yize ukusebenza kwazo kukuhle kakhulu) noma isitholi sokubuka se-HDMI ukukhombisa isithombe esithwetshulwe yikhamera.
Singasebenzisa futhi uxhumano lwe-RJ45 ukujabulela umkhawulokudonsa ophakeme kakhulu ngokusebenzisa ikhebula le-Ethernet, noma ngabe uma sithanda inketho engenantambo ngaphezulu, i-Insta360 Pro Iza ifakwe i-WiFi ukuze sikwazi ukuxhuma i-laptop noma i-smartphone yethu futhi ukwazi ukuyisebenzisa njenge-viewfinder, i-shutter eyi-remote, wenze ukulungisa isithombe, iqonde ngqo kumanethiwekhi omphakathi, njll.
Njengoba ukwazi ukubona, kukhona izinketho ezahlukahlukene ezitholakalayo uma kukhulunywa ngokuxhuma.
Ikhwalithi Yesithombe ye-Insta360
Ikhwalithi yesithombe ingamandla amakhulu wemishini. Hhayi nje kuphela ukuthi singazijabulela izinqumo eziyi-8K kepha ubukhali besithombe bungaphezulu kokujwayelekile, into ebaluleke kakhulu kulabo abafuna ukuthatha izithombe nge-3D noma ngeqiniso elingokoqobo, okukhulayo ngenxa yezingilazi ezinjenge-Oculus nokuthi umhlaba wokumaketha noma wokuzijabulisa ufuna ukuxhaphaza ukuze unikeze okuhlangenwe nakho okusha kubasebenzisi.
Ukwelashwa kanye nokuhlanganiswa kwazo zonke izithombe ezithwetshulwe ilensi ngayinye kusebenza kahle kakhulu futhi lokho kunikeza ividiyo imiphumela engokoqobo yombukeli.
Uma sisebenzisa ikhamera ubukhali buthuthukiswa ngokuphawulekayo ekuthatheni izithombe maqondana nevidiyo. Ngezansi ungabona isibonelo sesithombe esithathiwe nge-Insta360 Pro ekhonjiswe iflethi, bese kusetshenziswa isithombe esifanayo esinomphumela "weplanethi encane".
Isithombe esisicaba (bona usayizi woqobo)
Kunzima impela ukuchaza ngamagama isigaba esinikeza amathuba amaningi, okudala nawokusebenza. Okucacayo yilokho i-hardware ihambisana ne-Insta360 Pro singathola imiphumela emihle kakhulu ngaphandle kokuthi kusetshenziselwe ubuchwepheshe. Abathandi bezithombe namavidiyo bangasebenzisa leli khamera elingu-360, yize kufanele kucace ngezindleko zokuthenga imishini yalolu hlobo (into ebesivele siyicabanga kumakhamera we-reflex afana neCanon 5D Mark).
Futhi yi-software okufanele isolwe nge-Insta360 Pro elungiselelwe zonke izethameli. Sinezinhlelo zokuhlela ezihlelekile sonke esizaziyo kodwa umenzi usinikeza izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene eziningi Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, noma ngabe yiluphi ulwazi lwethu:
Uhlelo lokusebenza lokulawula ikhamera: njengoba igama layo liphakamisa, uhlelo lokusebenza ukwazi ukusebenzisa i-Insta360 Pro kusuka kuselula, ithebhulethi noma ikhompyutha yethu.
I-Insta360 Pro Stitcher: iyi-software esiza ukuqeda amaphutha angaba khona ekuhlanganisweni kwezithombe ezithwetshulwe yikhamera, into ejwayelekile kumamodeli ayisisekelo enkampani. Ukubuyekezwa kwakamuva kwe-firmware okutholwe yi-Insta 360 Pro kuthuthukise kakhulu lesi sici.
Umdlali we-Insta360: ungumdlali wezithombe namavidiyo athunjiwe. Simane nje sihudule ifayela elenziwe yikhamera futhi singalijabulela ngokuzenzakalela ngefomethi ye-360 degree.
I-Insta360 Studio: uma sifuna ukuthekelisa noma ukwenza ukuhlela okulula ezithombeni noma kumavidiyo, lolu hlelo luzokuvumela ukuthi wenze njalo.
Lezi yizinhlelo zokusebenza eziyinhloko umhlinzeki asinikeza zona kepha njengoba ngisho, singasebenzisa noma iyiphi enye isoftware yokuhlela isithombe nevidiyo.
Uhlelo lwe-Insta360 Pro Iqembu eliphelele futhi eliqondiswe emkhakheni othile labantu. Ukukhuphuka kweqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona nangokwangempela kubangela imikhakha efana nokumaketha ukuthi izihlele kabusha ngokunikeza abasebenzisi izindlela ezintsha zokuxhumana nemikhiqizo nokuyilapho le khamera ingadlala khona iqhaza lokwehlukanisa ibhizinisi lasekhaya.
Yakha ikhwalithi bese uqeda
Amathuba obuchwepheshe nobuciko
Ukuzimela okuphansi. Kungcono ukuba namabhethri amaningi okusiza noma usebenze ngekhamera exhunywe kunethiwekhi.
Uma ungeyena uchwepheshe futhi umane uthanda umhlaba wezithombe nevidiyo, i-Insta360 Pro ungumlingani ohamba phambili ophelele. Sizohlala sinememori erekhodwe kuvidiyo noma isithombe esingu-360 degree kwikhompyutha yethu futhi sinekhwalithi engaphezulu kokuhle, yize kukude nemiphumela esiyithola nganoma iyiphi ikhamera ye-SLR noma i-APS-C. Kulokhu, kufanele sinqume ukuthi sikhetha okuqukethwe okubandakanyayo kunokuqukethwe kwendabuko, noma sikwazi ukugcina okuhle kunakho konke imihlaba.
Ishaye? Ama-euro angama-3.950 ozokhokha ukuze uwuthole.
Ukubuyekezwa kwe: UNacho Cuesta
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-camcorder » Buyekeza i-Insta360 Pro
I-Starbucks idlula i-Apple Pay, i-Google Pay ne-Samsung Pay ngezinkokhelo zeselula
I-LG Q7 izofika eSpain ngoJuni ngama-euro angama-349